အစိုးရအနေဖြင့် လယ်သမားများ အရေးကို အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးရန် ကော့မှူးနှင့် ပဲခူးမှ တောင်သူ? - Yangon Media Group
အစိုးရအနေဖြင့် လယ်သမားများ အရေးကို အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးရန် ကော့မှူးနှင့် ပဲခူးမှ တောင်သူ?
အစိုးရအနေဖြင့် လယ်သမားအရေးကို အမြန်ဆုံးဖြေရှင်း ပေးရန် ကော့မှူးနှင့် ပဲခူးမှတောင်သူ အချို့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် ဆန္ဒထုတ် ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကော့မှူး မြို့နယ်နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှ လယ်သမား ၁ဝဝ ခန့်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဇွန် ၃ဝ ရက်မှ စတင်ကာ ကော့မှူးမြို့နယ်မှ စတင်ထွက်ခွာလာကာ တွံတေးမြို့မောင်းတီး ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ညအိပ်ရပ်နားပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၈၉၄ မြေသိမ်းဥပဒေနှင့်မညီဘဲ သိမ်းဆည်းထားသော လယ်ယာမြေများကို မူလပိုင်ရှင်များထံ အမြန်ဆုံးပြန်လည်အပ်နှံပေးရေး၊ တောင်သူလယ်သမားများအား အရေးယူထားသော ပုဒ်မများကို တရားရုံးအသီးသီးမှ ပိတ်သိမ်းနိုင် အောင်အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရေးနှင့် အကျဉ်းထောင်အသီးသီးတွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသော လယ်သမားများကို အမြန်ဆုံးပြန် လွှတ်ပေးရေး စသည့်အချက်ခုနစ်ချက်ကို တောင်သူလယ်သမားများက ကြွေးကြော်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ လယ်သမားများလက်တွေ့ ရင်ဆိုင်နေသော အခက်အခဲများကို အစိုးရသိရှိနိုင်ရန် လမ်းလျှောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲများအား နိုင်ငံတစ်ဝန်း ထပ်မံဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆန္ဒပြအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်စုစုနွေးက ပြောသည်။
”ကျွန်မတို့က ဒီတိုင်းဒေသ ကြီးတစ်ခုတည်း လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး တွေက ဖိနှိပ်ခံလယ်သမားတွေကို ချန်လှပ်ခဲ့သလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးတွေက သမဂ္ဂတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် သွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်”ဟု ဒေါ် စုစုနွေးက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။ ရန်ကုန်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲပြီး နောက် မန္တလေး၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးများတွင် လယ်သမားများလမ်းလျှောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲများ ဆက်လက်လုပ် ဆောင်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်း ဆန္ဒ ပြပွဲဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦး ဇော်ရမ်းကပြောသည်။ ”ကျွန်တော်တို့က အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သံ ချောင်းခေါက်တာပါ။ မြေပြင်မှာ တကယ်ခံစားနေရတဲ့ လယ်သမား တွေရဲ့အသံကို အစိုးရကကြား အောင်ပါ”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
လယ်သမားများ၏ တင်ပြချက်များကို အစိုးရက မသိကျိုးကျွန် ပြုနေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အထက်အဆင့်ဆင့်သို့ လယ်သမားများ၏အခက်အခဲများကို စာရေးသားတင်ပြချက်များပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ ထူးခြားမှုမရှိခဲ့ကြောင်း ဆန္ဒထုတ် ဖော်သူအချို့က ပြောသည်။ ပဲခူးခရိုင် သာယာကုန်းကျေးရွာမှ မြေသိမ်းခံလယ်သမားတစ်ဦး ဖြစ်သူဒေါ်ဌေးကိုက”ကျွန်မတို့ အောက်ခြေမှာ တကယ်ခံစားရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို မြေစာရင်းတွေ၊ ထွေအုပ်တွေ၊ ရပ်ကျေးအဖွဲ့အစည်း တွေက လုံးဝကို မသိသလိုလုပ်နေတယ်။ အကူအညီလည်း လုံးဝမ ပေးဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ ကော့မှူးကနေ ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမအထိ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြတာ ပါ”ဟု ပြောသည်။ ယခုအစိုးရသည် ပြည်သူမှ တင်မြှောက်ထားသည့် ပြည်သူ့အစိုးရဖြစ်သည့်အတွက် ဆန္ဒပြပွဲများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းအတွက် ကောင်းမွန်သောရလဒ်တစ်စုံတစ်ရာရလာမည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း မစုစုနွေးက ပြောသည်။
မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် ကြွေးကြော်မှုကိုမူ မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆန္ဒမထုတ်ဖော်ရန် တား မြစ်ထားသောနေရာဖြစ်သဖြင့် မ ပြုလုပ်ရန် ဟန့်တားခဲ့ပြီး တာမွေတွင်ပြုလုပ်ရန် ညှိနှိုင်းပြောဆိုခဲ့ သော်လည်း ဆန္ဒပြသူများက လက်မခံသဖြင့် အချိန်တစ်နာရီ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ တာဝန်ကျမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးက ”အခု နံနက် ၁၁ ခွဲဆိုတော့ မွန်းလွဲ ၁၂ ခွဲထိလုပ်လိုက်။ တစ်နာရီပဲနော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က စကားအများကြီး မပြောချင်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ် နေလို့”ဟု ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများကို ပြောဆိုကာခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါသိမ်းဆည်းခံလယ် ယာမြေများကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး မူလပိုင်ရှင်များကို ပြန်လည်ပေး အပ်ရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ရှိနေကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က ဇွန် ၂၆ ရက် လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ် ရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ ဆဋ္ဌမအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအ ဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထရန့် မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံက ရေနံတစ်နေ့ စည်ပေါင်းနှစ်သန်းအထိ တိုး ထုတ
ပရီးမီးယားလိဂ်၏ အသက်အကြီးဆုံး နည်းပြဖြစ်လာရန် ဟော့ဂ်ဆန် မမျှော်လင့်ခဲ့